Homeसमाचारअभियुक्त दिनेशका बावुको बकपत्र– मैले नै गरेको हुँ भन्यो, नप’त्याएर के गर्नु ? (अडियो सहित)
February 19, 2021 admin समाचार 5750
भागरथी घट’नामा भरपर्दो प्रमाण प्रहरीले दिन नसकेको भन्दै परिवारले श’व बझ्न अ’स्वीकार गर्दै आएका थिए । तर विहिवार घट’नामा संलग्न भएको भनिएका दिनेश भट्टले क’र णी पनि गरेको स्वीकार गरेपछि भागरथीको श’व परिवारले बुझेका छन् । दिनेशले ह’ त्या गरेको भएपनि क’र णी भने आफुले नगरेको बताएँदै आएका थिए ।
तर विहिवर भागरथी र दिनेशकै आफ्नै वुवा दिपकका अगाडी प्रहरीले लिएको व’यानमा उनले कर’ णी पनि गरेको स्वीकार गरे । छोराले त्यसो भनिरहँदा उनका बुवा दिपक भट्ट पनि थिए । छोराले घ’टना स्वीकार गरेपछि अहिले दिपकको संसार उ’जाडिएको छ । उनी भएका अरु सन्तान सुस्त मनस्थितिका छन् । जेठो छोरा दिनेश माथि नै उनको भरोसा थियो । तर त्यही भरोसा नै छुटेपछि अहिले दिपक नि’रास भएका छन् ।
उनले छोरासंग भेटेपछि एक मिडियासंग कु’राकानी गरेका छन् । नेपाल प्रेसले दिपकसंग भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उनले यस्तो भने’का छन्। रालाई भेटें, हिरासतमा राखेको रहेछ । प्रहरीले छान’बिन गरिराखेको छ । छोराले मेरै सामु ‘मेरै हातले ह ‘त्या भया हुन्’ भन्यो । पारिवारिक वि’ वादले भनेको कुरा किन भनेको हो, त्यो खै’ मलाई थाहा भएन । हामी प्रति परिवारमा त अहिलेसम्म वि ‘वाद र रिसइबी केही थिएन ।
पुरानो घ’टना होला खै, म पनि पाँच वर्षको थिएँ । त्यो बेलाको कुरा यसको दिमागमा कसरी आयो, के आयो त्यो छोडिदिनुस् । त्यसपछि त हाम्रो केही झ’ ग डा भएको थिएन ।
छोराले भन्दैछ ९ कक्षामा स्कूल जाँदाखेरि मलाई गा ‘ली दिएको थियो । मास्टरलाई पनि कुरा लगाइदिएको थियो । म सित भनेको कुरा मलाई रि’ स उठ्यो । अहिले ११ कक्षामा पढिराखेको छ । दुई वर्षदेखि रि स उठेको थियो । गा’ ली दि न्थी र टिचरलाई भन्दिन्थी । त्यही भएर मैले मा’ रे को हो भन्यो । स्कूलमा बच्चाहरूसँग खेल्दा होला, कतै जाँदा टिच’रलाई भन्दिएको होला ।
भागरथी नातामा मेरो दाइकी छोरी भतिजी हो । दाइ नाता लाग्छ उसको बाउसँग । दिनेश परि’वारको जेठो छोरा हो । अरू दुई छोरी र एउटा छोरो छ । तर उनीहरू तीनै जना सुस्त मन’स्थितिका छन् । तीनवटै बच्चाको कुनै भरोसा छैन । मेरो भरोसा भनेकै यही एउटा थियो । पढेलेखेको, भ’रोसा गर्ने यसको पनि यस्तै हा’ लत भयो ।
आर्थिक अवस्था त्यस्तै हो । दिनभरि काम गरेर खाने हो । हल्का’फुल्का खेतीकिसानी हुन्छ । त्यतिले पुग्दैन, किनेर खाने हो । आफ्नो खेतबाट पुग्दैन । किनेर पनि खान्छांै । म’जदूरी गरेर पनि खरिद गरेर ल्याउँछौं ।
मैले अब कसरी भन्ने, आफ्नो नज’रमा त्यस्तो थिएन । मेरै नजरमा मात्रै होइन गाउँकै मान्छेहरू पनि तेरो छोरा यस्तो थिएन भन्छन् । अहिलेसम्म यस्तो भरो’सा गरेको थियो । खै कुन दिनको दशाले यहाँ च’ पे टमा प स्यौं भनिरा’छन् गाउँलेले पनि ।
जसकी छोरी हुन्, ती भाउजूले पनि भनिराखेकी छिन्– यो मेरो छोरा हो । यो छोराले त यस्तो गरेको हुन’सक्दैन भनिराखेकी छन् । अब मेरै छोरा मैले गरेको हो भन्छ त के भन्ने ? क’र णी पनि गरेको हो भन्दैछ । नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको अ’डियो यस्तो छ । – इताजा खबर
March 1, 2021 admin समाचार 6132
May 8, 2021 admin समाचार 5583
May 11, 2021 admin समाचार 5226